Aftida Dastuurka Turkiga - BBC News Somali
Aftida Dastuurka Turkiga
13 Sebtembar 2010
Image caption Tayyip Erdogan, Turkey PM
Ilaa 60% ayaa taageray dib-u-habaynta dastuurka dalka Turkiga, aftidii loo qaaday Axaddii, waxana la filayaa inay tani u sahasho in Turkigu buxiyo shuruudaha ururka EU oo uu doonayo inuu ku biiro. Isbedelkan haatan waxa uu ku dhacay ilaa 29 qodob oo ka tirsanaa qodobada dastuurka
Waxan u gudubney marxalad taariikhi ah, oo ah tubtii hannaanka dimoqoraadinnimo ee habboonaa
Tayyip Erdogan, Turkey PM
Ra'iisal-wasaaraha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, waxa uu ku dooday in in isbeelkani looga baahan yahay dhinaca xoojinta dimoqoraadiyadda, waxanu soo dhaweeyey guusha aftidani oo xisbigiisu watey. Waxa kale oo uu ku ballan qaaday in weliba mustaqbalka la sii kaabi doono qodobo kale o ka mid ah isla dastuurkani, lalana tashan doono xataa mucaaradka.
Image caption Khariidada Turkiga
Dalalka ururka midowga Yurub ee EU iyo dalka Maraykaka ayaa iyaguna si diirran u soo dhaweeyey guusha aftidani, waxayna ku tilmaameen tallaabo dhinicii toosnaa loo qaaday, iyo inuu wax ka tari doono hannaanka dimoqoraadinnmo ee Turkiga
Dastuurkii hore ee Tukiga waxa dib u habaysay dawladdii milateriga ahayd ee 1982, waxanu awodda inta badan siinayey golaha nabadgelyada iyo ku dhaqanka hab dawladnnimo oo cilmaani ah. Isla markaasina waxa uu xaddidayey axsaabta iyo mabaadi'da ay ku dhisnaan karaan. Isbedelka haatan ee aftidan loo qaaday waxa uu inta badan saamaynayaa qodoadaasi, iyo weliba xulka iyo magacaabista hey'adaha cadaaladda.
Axsaaba mucaaradka ah ayaa iyaguna ka horjeeday isbedelkan, iyaga oo qaba aragti ah in laga leexanayo hab-siyaasadeedkii cilmaaniga ahaa ee dawladnnimo, in dastuurkani dariiq u furayo axsaabta diiniga ah ee mayalka adag, in uu hey'adaha caddaaladda hoos keenayo xisbiga talada haya oo awod weyn ku yeesha, iyo in aan si buuxda loola tashan, lana tixgelin aragtida mucaaradka.